Manova sy mamerina mamaky boky taloha nataon'i Cecilia Levy | Famoronana an-tserasera
Manova ny boky taloha ho kaopy sy lovia taratasy
Imbetsaka ny fotoana hitantsika asa tanana sasany izay gaga anay noho ny maha-izy azy sy ny famoronana. Amin'ny alàlan'ny taratasy dia manana fitaovana izahay izay nanjary mpiorina amin'ny fidirana isan-karazany, izay ahafahantsika manavotra ity tanàna vita amin'ny fomba mahatalanjona ity. izay nantsoina hoe Paperholm.
Cecilia Levy dia mpanakanto hafa hitany taratasy ho fitaovana manokana, ary bebe kokoa ilay iray izay ao anaty boky taloha ary efa namerimberina mba hanomezana sary sokitra antsika miaraka amin'ny mampiavaka azy manokana. Ity artista soedoà ity dia manova ireo boky sy tantara an-tsary taloha ireo ho lasa sanganasa kanto amin'ny taratasy.
Levy izao dia manana fientanam-po be eo am-pelatanany rehefa mikaroka ny endrika tsara indrindra amin'ireo ravina ireo avy amin'ireo boky taloha ireo. Ny takelaka vita pirinty amin'ny ranomainty izay manome lovia, lovia na kaopy tena tsara, ary filokana tena izy.
Porofon'ireo boky taloha ireo hiafara any amin'ny fako izy ireo, ary misy toeran-kafa iray hafa hita ho azy ireo ho ampahany amin'ny asa kanto lehibe. Nanomboka nisedra an'io karazan-taratasy 3D io i Levy tamin'ny taona 2009. Nanomboka tamin'io taona io dia namorona karazana zavatra marobe izy, toy ny takelaka, kaopy na vilia baolina.
Ao amin'ny mitady boky vaovao hanomezana endrika hafa azy ireo ary izy ireo dia manjary lasa haingo amin'ny olona iray izay aleony mamaky boky vita pirinty amin'ireo nomerika kokoa toy ny elektronika.
Manana ny tranonkalanao ianao izay ahitanao asa bebe kokoa toy ny baoty, akora na ireo fialamboly am-boalohany amin'ny karazany sy endrika rehetra. Mpanakanto taratasy iray hafa izay miandraikitra ny fanodinana ireo boky sy tantara an-tsary taloha avereno aminay amin'ny fomba tena liana izy ireo ary manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Manova ny boky taloha ho kaopy sy lovia taratasy
Ireo zavaboary kely mahatalanjon'i Kasia sy Jacek Anyszkiewicz
Plugins maimaim-poana no atolotra ho an'ny famolavolana